Allgedo.com » 2012 » October » 29
Home » Archive Daily October 29th, 2012
Abwaan caan ah oo caawa lagu dilay Magaaladda Muqdisho
Alla ha unaxariistee waxaa caawa magaaladda Muqdisho lagu toogtay Abwaan Warsame Shire Cawaale oo ka mid ahaa Abwaaniinta iyo Jilayaasha Soomaaliyeed. Rag ku Hubaysan Aalada Bastooladda ayaa marxuumkan ku toogtay Degmada Waabari ee Magaalada Muqdisho sida ay sheegeen dad qaraabadiisa ah. Marxuum Abwaan Warsame Shire Cawaale ayaa dhawaanahaan ka howl galayay idaacadda Kulmiye ee ku taallo Magaalada...
DHAGAYSO: Odayaasha Jubooyinka oo kulan ka yeeshay Maamul usamayta..
Odayaal iyo waxgarad kasoo jeeda goboladda Jubooyinka ayaa kulan ka yeeshay sidii maamul loogu samayn lahaa goboladaas. Kulankaas oo soconayay mudo labo todobaad ah ayaa waxaa kasoo qeyb galay waxgaradka iyo odayaasha kala duwan ee Jubooyinka. Markii uu soo dhamaaday kulankaas ayaa waxyaabihii kasoo baxay waxaa saxaafada usheegay Suldaan Muse Nuur oo kamid ah Odayaashii kulanka ka qeyb gashay. Waxaa...
Golaha Wasiirada oo laga dhigayo 9-Xubnood iyo Odayaasha Muqdisho oo ka digay
Warar ay AOL ka heshay Aqalka Madaxtooyada iyo Xafiiska Ra’isul Wasaaraha ayaa sheegaya in si weyn loo yareeyay tirada golaha Wasiirada. Ilaa 9 Wasiir oo kaliya ayaa lasoo sheegayaa in uu soo magacaabi doono Ra’isul Wasaare Dr Saacid saacadaha soo aadan. Gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha Hawiye Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa sheegay in ay ka warhayaan in 9 Wasiir kaliya la magacaabayo. Waxaa...
Faroole oo sheegay in Shabaab-kii Koofurta Soomaaliya ay Puntland galeen
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Raxmaan Sh Maxamed Faroole ayaa shaaca ka qaaday in Al-Shabaab inta badan laga saaray gobolada Koofureed ee Soomaaliya. Isagoo ka hor hadlayay kulankii barlamaanka Puntland ayaa waxaa uu sheegay in amaanka Puntland loo yaabo, kadib markii deegaanada Puntland ay soo galeen Shabaab kasoo cararay Koofurta Soomaalia. ‘Waxaa loo baqaa amaanka Puntland, maxaa yeelay...
Tirakoobka Shan degmo oo gobolka Banaadir ah oo lasoo gaba gabeeyay
Maamulka gobolka Banaadir ee dowlada Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in ay soo gaba gabeeyeen tirakoobka dadka iyo guryaha ilaa shan degmo. Tirakoobka ayaa waxaa lagu ogaanayaa tirada dadka, guryaha iyo dadka isugu jira Raga, Dumar iyo caruur sida uu sheegay Afhayeenka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf. Degmooyinka ilaa iyo hada tirakoobkaas uu kasoo dhamaaday ayaa waxaa ay kala yihiin Waabare,...
Al-Shabaab oo dhaawacay Gudoomiyaha dowlada ee Bardaale
Wararka naga soo gaaraya degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in uu si baxsad ah ku bad baday gudoomiyihii dowlada ee degmadaas. Rag katirsan Dagaalyahanada Shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday gudoomiyaha dowlada ee degmadaas Bardaale. Afar kamid ah ciidamada dowlada iyo ciidamo ilaa shan ah oo Shabaab ay ahaa dhanka kale ku geeriyooday dagaal mudo soconayay oo labada dhinac udhaxeeyay. Xaalada...
Ciidamada dowlada oo lagu eedeeyay in ay shacab dileen hadana ay Shabaab ku sheegeen
Xili ciidamada dowlada Soomaaliya ay shalay degmadda Yaaqshiid kusoo bandhigeen meydka nin ay ku sheegen Shabaab ayaa waxaa arimahaas beeniyay wiil uu dhalay ninka ladilay. Cali Muuse Ibraahin oo ah Wiilka uu dhalay marxuumka ladilay ayaa saxaafada usheegay in Aabihiis uusan waligiis noqon Al-Shabaab hase ahaatee ay ciidamada dowlada iska toogteen. ‘Ciidamada dowlada ayaa iska toogtay Aabahey Muuse...
Pro Jawaari oo digniin xoogan udiray Ra’isul Wasaare Dr Saacid iyo Xukumada lafilayo
Gudoomiyaha barlamaanka dowlada Soomaaliya Pro Maxamed Sh Cismaan Jawaari ayaa shaaca ka qaaday in shaqadooda ugu badan ee afarta sano ee soo aadan ay noqon doonto la xisaabtanka xukumada. Waraysi dheer oo uu bixiyay ayaa waxaa uu sheegay Dr Jawaari in ay xili kasta la socon doonaan shaqada golaha wasiirada, waxii qaldana ay qaban doonaan. ‘Shaqada barlamaanka ee afarta sano ee soo socota waa...
Taliye katirsan dowlada oo lagu dily Sh/Hoose iyo Aas qaran oo loo sameynayo
Al-Shabaab ayaa shalay gobolka Sh/hoose ku toogtay sargaal katirsan ciidamada dowlada Soomaaliya. Sargaalkan waxaa uu ahaa taliyihii guutada 5-aad ee ciidamada dowlada Soomaaliya waxaana lagu magacaabayay Jen Maxamed Faarax Gordon. Wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga ahna R/ wasaare ku xigeen Xuseen Carab Ciise ayaa sheegay in aasqaran loo sameyn doono Marxuumkan katirsanaa ciidamada xooga dalka. Al-Shabaab...